INCUBATOR COVATUTTO 108: DIB U EEGIS, SHARAXAAD KA MID AH ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Ugu Weyn Ee Kufsi
Dib u eegida sheeko-qabtaha ee ukunta Toat 108
Waxaad ku wareegi kartaa qalab kala duwan oo loogu talagalay kor u qaadida chicks, halka guusha guud ee ganacsiga digaaga inta badan ay ku xiran tahay natiijada baadhitaanadaas. Sidaa daraadeed, doorashada xulashada isweydaarsiga, waa inaad ku tiirsanaataa warshadaha la xaqiijiyay, kuwaas oo si fiican uga jawaaba dadka ay soo martay badeecadahooda. Model Covatutto 108 sababtoo ah tayadiisu waa midka ugu caansan.
Qaabkan, magaca buuxa ee "Novital Covatutto 108 Digitale Automatica", wuxuu leeyahay awood 108 sacadood. Tilmaamku waa inuu si buuxda u shaqeeyo (kuleylka, gawaarida ukunta, hawo-qaadashada, nalalka, iwm., Iyada oo aan wax-dhex-galin aadane ah) oo ku haboon inuu kobciyo dhammaan noocyada ukunta, digaag iyo pigga caadiga ah, ama turkey.
Qalabka wuxuu leeyahay laba godad quraarad ah - si uu u kormeero marxalad kasta oo hawleedka ah iyo haddii ay wax dhacaan, calaamadee hagaajinta buuga.
Way ku habboon tahay in la isticmaalo - tusaale ahaan, waxaa loo habeeyay si fudud.
Ma taqaanaa? Digaagga ayaa daboolaya ukun kasta, iyadoon loo eegin bacriminta ama laga bilaabo nooca - tusaale, duck ama goose.
Novital waa shirkad Talyaani ah oo ku takhasustay digaaga, xoolaha, beeraha iyo qalabka beeraha muddo ka badan 30 sano. Ugu horreyntii, shaqaalaha shirkaddu waxay diiradda saaraan hagaajinta tayada joogtada ah, iyada oo la isticmaalayo oo keliya agab dabiici ah oo wanaagsan iyo ammaanka alaabtooda.
Isku-dhafkan waa mid yar oo cabbirka iyo miisaanka, iyo sidoo kale ergonomic:
miisaanka - 19 kg;
cabbirka - width 600 mm, dhererka 500 mm, dherer 670 mm;
nooca tamarta - 220 V caanaha;
saxsanaanta xakamaynta heerkulka - 0.1 ° C;
bandhig dijitaal ah - joogo;
nooca kuleyliyaha - electromechanical.
Soo ogow faa'iidooyinka ay ka mid yihiin faa'iidooyinka ku jira "Remil 550TsD", "Titan", "Stimulus-1000", "Layer", "Horumar Laba", "Cinderella", "Blitz".
Sifooyinka wax soo saarka
Qalabka wuxuu leeyahay laba xabbo oo khaas ah oo loogu talagalay in la dhigo ukunta, laakiin ku xiran nooca, lambarka la sii deyn karo koritaanka waa ka duwan yahay:
xamaam - 280 gogo ';
108 xabbadood oo digaag;
boodhadh - 168 gogo;
Qalabka - 120 gogo ';
turkey - 64 gogo ';
duck - 80 gogo ';
Goose - 30 gogo '.
Aad u faa'iido leh waa awooda lagu rakibo barnaamij gooni ah nooc kasta oo shimbir ah.
Waa muhiim! Xeerarka qoyaanka, heerkulka, sarrifka hawada, iyo sidoo kale wareegga ukumaha ee modelka Covatutto 108 - automatic.
Qiyaasaha qalabka ayaa u oggolaanaya in loo isticmaalo guriga iyo dhismayaasha si gaar ah u qalabaysan. Waxay u shaqeysaa si aamusnaan ah, markaa ma dhibayso.
Qalabka ayaa laftiisu ka kooban yahay:
2 baakidh oo loogu talagalay in la dhigo ukumaha;
bandhig muuqaal ah oo lagu xakamaynayo;
Guryaha balaastigga ee aan shaki lahayn;
albaabada oo leh laba furfurid kormeer;
laba istiraatiijiyeyaasha korantada si kor loogu qaado meesha bannaan;
taageerayaasha hoos yimaad si ay u xakameeyaan bixinta hawada iyo xakamaynta heerkulka;
taangiyo gaar ah oo bixiya heer caadi ah oo qoyaan ah.
Wixii kululeeyaha kululeeyaha korantada tuubada waxaa loo isticmaalaa.
Soo ogow waxa aad raadineysid marka aad dooranayso xeelad.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Dhinacyada wanaagsan ayaa waxaa ka mid ah:
ma abuuro buuq markaad shaqaynayso;
Thanks to automation uma baahna dadaal badan;
gawaarida tooska ah;
fududahay in la shaqeeyo lana hayo;
ku haboon noocyada kala duwan ee shimbiraha mustaqbalka;
awood u lahaanshaha ilaalinta geedi socodka iyadoo la adeegsanayo meelo gaar ah;
Kaliya qalab tayo leh ayaa loo isticmaalaa.
Noocyada taban waxaa ka mid ah:
miisaanka 19 kg;
no liiska qoyaanka;
aan si buuxda u shaqeynin.
Sidaa daraadeed, qaabkani wuxuu faa'iido badan ka helaa faa'iido la'aanta.
Baro sida loo kululeeyo digaagga barafka, ducklings, poults, goslings, fowlada guinea, quailes, indoutiat.
Tilmaamaha isticmaalka qalabka
Si aad u hesho natiijada aad rabto, waxaad u baahan tahay inaad ogaato shuruucda la raacayo.
U diyaargaroobidda shaqeynta
Ka dib markii la furfuro, qoob-ka-soo-qaboojiyaha waa in lagu dhejiyaa dusha sare, oo ka sarreeya 80 cm dhulka, iyadoo heerkul ah 17 ° C iyo 55% qoyaan.
Waa muhiim! Ka fogee kuleylka kulaylka iyo qorraxda tooska ah si aad isaga ilaaliso kulaylka.
Si aad u diyaarisid xakamaynta hawlgalka, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco algorithm:
Ka saar qufulka badbaadada (waa in la hayaa haddii gaadiidka kale uu suurtagal yahay).
Ku rakib qalabka xirmada.
Ku rakib tuubooyinka: si aad tan u samayso, u soo jeeg gawaarida ukunta oo ku riix gacmaha godka gaarka ah, ka dibna gadaal dib ugu rid.
Ku kala sooc dadka kala go 'gaarka ah.
Ku wareeji jihooyinka kala duwan.
Ku shub biyo diirran guluubyada iyo u dhig meeshii hoose.
Xir xiraha iyo ku xir xirka korontada.
Baro sida loo doorto heerkulbeegga kuleyliyaha.
Qeybaha soo haray waa in lagu sameeyaa shaashadda iyadoo la isticmaalayo fallaaro kor iyo hoosba, iyadoo ku xiran nooca ukunta iyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah iyaga. Xayawaanada waa la bedeli karaa inta lagu jiro mudada kabadan.
Ukuntada, waxay kuxirantahay noocyada, qadar go'an waxaa lagu meeleeyaa baakidh oo lagu rakibay maskaxda. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso heerkulka iyo muddada hawsha (maalmo). Haddii aan waxba laga dhejin, lambarrada laga soo bilaabo kormeerkii ugu dambeeyay ayaa la isticmaali doonaa.
Akhri xeerarka ku dhiga ukumaha ku jira masraxa.
Faa'iidada tusaalahan ayaa ah in ay tahay is-qaboojiye toos ah, sidaas darteed xawaareynta ukumaha laba jeer maalintii, heerkulka iyo qoyaanka waxaa lagu hagaajiyaa mashiinka laftiisa. Waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo biyaha kululeeyaha, sida loo baahdo.
Haddii ay dhibaato kaa haysato awoodda, ukunta waxaa loo bedeli karaa gacanta.
Wakhtiga ugu mudada dheer waa 40 maalmood.
Waa muhiim! Furitaanka qalabka iyada oo aan loo baahnayn in la jiifiyo ukunta waa mid aan loo baahnayn.
Saddex maalmood ka hor intaanad hirgelin waa inaad:
gabi ahaanba buuxi tuubooyinka biyaha;
joojiyaan habka ukunta ukunta;
hoos ugu dhig dhexda si dhexdhexaadku u dhaco biyaha.
Gawaarida waxaa laga yaabaa inaaney dhicin taariikh cayiman, laakiin maalin ama laba ka dib, taasi waa caadi.
Qiimaha celceliska waa:
UAH: 10 000 - 17 000;
raajada: 25 000 - 30 000;
ee dollarka: 500-700.
Qiimuhu way kala duwanaan karaan iyagoo ku xiran iibiyaha iyo heerka sicirka.
Ma taqaanaa? Daraasadihii ugu horreeyay ee laga helo dalka Masar waxaa la abuuray in ka badan 3,500 sano ka hor.
Sidaa darteed, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in qaabkani yahay mid ka mid ah kuwa ugu habboon, laakiin sidoo kale waxay leedahay cillado qaar. Muuqaalka ugu muhiimsan waa in Tusatutto 108 qaboojiyaha uu ku dhow yahay gabi ahaanba automated oo uma baahna daryeel gaar ah oo taxadar leh. Waxa kale oo muhiim ah in uu awoodo in uu meelo kala duwan oo ukun ah ku noolaado.
Shirkadaha Kombiyuutarada ee Covatutto: dib u eegis
Diidmada NOVITAL Covatutto 54 bil ka hor. Waxa uu sameeyay hal gabal - 40 ka mid ah ukumaha digaaga ah, midna wuu burburay - ka dib markii uu qoynay 10 cisho oo u muuqatay in ukunta aan qalabayn, waxa uu u muuqday in uu jirey embriyaha si fiican u kobcaya. 39 ukumood ee soo haray, 36 digaag oo caafimaad qaba ayaa la jaray. Horeba 3 usbuuc oo xoog leh, qallafsan, caafimaad leh. Inkbatorom faraxsan, fudud, fududahay in la isticmaalo, raqiisna ah. Noocyada Orange ayaa si toos ah dijital ah. Waxa uu ku darey biyo 4 ilaa 5 maalmood oo kasta, si muuqaal ahaan loogu go'aamiyey iyada oo loo marayo daboolka hufan marka la isku daro. Saaxiibada waxaa laga keenay Lubatutto 162 quail. Sidoo kale ku qanacsan qalabka.
Maalin fiican oo dhan oo dhan ... Anigu waxaan ku koobnaan doonaa ... Waxaan rabaa in aan sheego in qoob-ka-niyadjab igu niyadjabay ... Anigu ma soo dajin doono sawirada sida kor ku qoran "NOVITAL" oo ah 108 ukun huruud ah oo laba shey. sida kor ku xusan, 1aad ... xaqiiqdii ma haynin 108 ukun digaag ah, sida soo iibiyaha tilmaamaya, wuxuu ku guuleystay in uu qabsado 80 qumaati oo ka dibna heer kale duwan, heerkulkii 2aad ee u dhexeeya saxanka hoose iyo sare wuxuu ka duwan yahay sababo ... kulan aan caqli gal ahayn, (oo la hubiyo laba heerkulbeeg) ayaa wax soo saarku ka fiicnaaday, saxanka sare, iyo wax kasta oo ay si sax ah u xakameeyeen heerkulka kuleylaha ... Waxaan guud ahaan ka aamusnaa heerkulbeegeyga hooyo, ... maanta maanta waxaan diwaan galiyay oo go'aansaday inaan ka tago dib u eegis maadaama digaaggu uu sidoo kale ahaa maanta) ... iyo ... 35 digaag ... inta badan taararka sare ... nkubatoru sanadkii labaad keentaa ... 50-60% ... jiro ah hagitaanada R-com-50 saarka of 60-80%, sidoo kale, sida ku qoran soo saaraha 50 baakidh of ukunta laakiin si cad u hoos dusha ka mid ah ukunta 48 ukunta! fikradayda; Haddii aad qaadatid "NOVITAL" ka dibna waxa fiican inaad qaadato tiro yar oo ukumo ah (oo leh hal saxan) waxaan qabaa in soo-saarku uu noqon doono mid ka fiican !!!!!, nasiib wacan!
Adiga ayaa go'aansanaya, laakiin anigu aad ayaan ugu qanacsanahay iyaga, digaagdarrada digaagdarrada digaagdooda waxay udhaxeeyaan 30%, digaagga 50%, tanina waxay ku dhowaad 100% la bacrimiyey. Ukumahaaga way wanaagsan yihiin, markaad ku iibsato 100 rubi, ama 150 (Ruushka), oo waxaad heli doontaa oo kaliya 50%, waxay noqon doontaa ceeb. Waxay yiraahdaan waa in jacaylku uu dib u casriyeeyaa, waa wax aad u badan, laakiin ma haysto farsamo iyo hadda walaashay iyo waxaan go'aansaday inaan dalbado Blitz72 horayba. Qofna ma sheegayo in dhamaan Blitzs ay yihiin kuwo aad u fiican, waxaa jira meel walba, laakiin sida qaanuunku u socdo waa wax wanaagsan, mana aanan maqlin dib u eegis wanaagsan. Haddii aan iibsaday blitz 2 sano ka hor, markaas waxaan iibsan lahaa 5, ku dhufo by 72! Waxay soo baxday 360 ukun. Xitaa haddii 3 ay xun yihiin oo 2 waxay ahaayeen kuwo wanaagsan, 144 ukumeed ayaa soo baxay, 162 ayaa halkan lagu dhawaaqay, iyo 90 ukumood oo culeyskiisu yahay 60 garaam ayaa dhab ahaantii soo galay. Adiga ayaa go'aansan, haddii aan ku amri karno Blitz, ka dibna waxaan ka dhigi doonaa shoole wax aan loo baahnayn. Waxaan qoray oo ku saabsan khibradeyda.
//picevod.forumbook.ru/t4971-topic?highlight=incubator # 610152
Warshad ornamental koraya
Muxuu cunayaa toonta caloosha oo madhan - faa'iido ama waxyeelo gaarsiisan jirka?
Sida loo abuuro oo u koro basbaaska yar
Qurux badan oo foorarsi ah - Lip Big Lip. Sifooyinka daryeelka iyo ubaxa sawir
Yamaandhada yaryar ee daaqadaha: sida loo abuuro oo u koro iyo inta jeer ee ay biyaha ku jiraan?
Geed lacag ayaa soo jiidata caafimaadka!
Gooyo cherry macaan ee dayrta
Kala soocid iyada oo loo qaybinayo baadiyaha
Noocyo Beer ah
Noocyada Caanaha ah
Kala xulo bogatyr
Foomamka Hybrid ee canab
Waxyaabaha canabka ah
Golaha Bariga Dhexe ee Bariga Dhexe
Kordhinta likaha lohod
Noocyada canabka ah ee hore
Shaaha ayaa kacday
Uruurinta jelly boqornimada
Qof walba waa yaqaanaa baranbarada guriga. Waxaa laga heli karaa qol kasta, waa guri caadi ah, xafiiska ama hoteelka. Marka "marti aan la martiqaado" la helo, qofku badanaa wuxuu dareemaa raaxo. Dareenkaas waa mid la fahmi karo. Joogitaanka cayayaanka ee jikada, hal waddo ama mid kale, waxay ka hadlaan nacasnimada mulkiilayaasha guryaha, inkastoo aan had iyo jeer ahayn. Read More
Sidee loo kariyaa qashin jarjar digir ah? Waxaanu kula wadaagi karnaa cuntooyinka qaar.
Wakiilada ugu wanaagsan ee barafka hore
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kufsi 2020